IMalawi Visa ekwi-Intanethi | I-eVisa eya eMalawi | natvisa.com
Isicelo seMalawi seVisa esikwi-Intanethi
Isebe laseMalawi lokufuduka kunye nobumi lazise indlela elula kunye elula yokufumana i-visa yokuya eMalawi. Le yinkqubo ye-elektroniki yesicelo se-visa apho abafaki zicelo kungafuneki bajongane nengxaki yokulungiselela ukuqeshwa kwindlu yozakuzo, ukubonisa ixesha lokuqeshwa kunye nezinye iinkqubo ezininzi ezinzima. Ngoku, unokufaka isicelo kwaye ufumane i-eVisa yakho kuyo nayiphi na indawo emhlabeni. Konke okufuneka ukwenze kukugcwalisa iphetshana lesicelo sakho se-visa kwi-intanethi, ungenise uxwebhu olufunekayo kwaye wenze intlawulo. Kwiintsuku ezimbalwa, isicelo siya kuqwalaselwa kwaye uya kufumana i-visa yakho kwi-imeyile yakho.
Iindidi zeMalawi Visa
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli 90 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-90 Zodwa / Zimbini Faka isicelo ngoku
ITrans eTVisa Imeyli 90 Days Transit enye Faka isicelo ngoku
Ukuhamba ukuya kwelaseMalawi
Abantu abaceba ukuya eMalawi kufuneka babe nala maxwebhu alandelayo xa befaka isicelo se-eVisa. Ezi zi Ikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zakho zepaspoti kwaye i Ifoto yomenzi-sicelo. Ukuba umfaki-sicelo uhamba nomntwana (oneminyaka engama-21 nangaphantsi) kufuneka ke babonelele ngesiqinisekiso sokuzalwa somntwana kunye neleta yemvume evela kubazali okanye kubagcini.
Abafakizicelo kufuneka baqiniseke ukuba bane-id esebenzayo ye-imeyile, abaya kuba nakho ukufikelela kuyo xa kufuneka njalo. I-imeyile iya kuba luncedo ukufumana ulwazi malunga nenqanaba lesicelo se-visa kunye ne-eVisa uqobo.
Xa usenza isicelo se-eVisa eMalawi, kufuneka ube nencwadana yokundwendwela esemthethweni. Ngaphandle kolu xwebhu, abenzi-sicelo abayi kuvunyelwa ukuba benze isicelo se-eVisa. Kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu. Nje ukuba i-eVisa inikwe iya kubavumela abafaki zicelo ukuba bangene.
Abahambi bamanye amazwe kufuneka babonelele ubungqina bendawo yokuhlala xa baceba ukuya eMalawi. Ubungqina mabubekho ngelixa ufaka isicelo se-eVisa. Isenokuba kukubhalisa okanye iinkcukacha zobhaliso lwehotele.
Yavunywa iMalawi Visa
Xa befika eMalawi, abahambi kufuneka babe ne-eVisa evunyiweyo neyasayinwayo. Bayacelwa ukuba bangenise olu xwebhu kwabasemagunyeni.
Kunye ne-visa evunyiweyo, iindwendwe kufuneka ziveze ipasipoti yazo. Ipaspoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Iinkcukacha zeMalawi Visa
Yintoni iVisa yaseMalawi?
Ngelixa ukucwangcisela uhambo yinto yonke evuyisa wonke umntu, owona mceli mngeni omkhulu abajamelana nawo abantu kukufumana i-visa. Yonke inkqubo yokulungisa ixesha lokuqeshwa kwindlu yozakuzo, ukubonisa ngomhla omiselweyo, ukubanjwa kwawo onke amaxwebhu kunye nokuma emigqeni emide yinto yokugqibela abanokufuna ukuyenza. Ukwenza ukuba le nkqubo ibe lula kwaye ilula kubahambi abathanda ukuya eMalawi, iSebe laseMalawi lokufudukela kweli lizwe kunye nelobemi lazisa iVisa ngoNovemba ka-2019. Yonke inkqubo, eqala ngokufaka isicelo se-Visa ukuyifumana, yenziwa kwi-Intanethi, encede abantu ukuba bafumane olu xwebhu nakweyiphi na indawo.
Amanyathelo okufaka isicelo se-eVisa yaseMalawi
Ukufumana i-eVisa kulula kunokufumana i-visa yesiqhelo. Ngamanyathelo ama-3 akhawulezayo, uya kuba nakho ukufumana olu xwebhu lokuhamba.
Dala i-akhawunti: Inqanaba lokuqala kwinkqubo yokufumana i-eVisa yakho, ukudala iakhawunti. Kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi karhulumente kwaye wenze i-akhawunti. Ngale akhawunti, uya kuba nakho ukwenza yonke imbalelwano enxulumene ne-visa, wazi ngemeko yayo kwaye ufumane ivisa.
Faka isicelo seVisa kwaye ubhatale: Emva kokuba wenze iakhawunti, kufuneka ugcwalise iphetshana lesicelo le-eVisa. Qinisekisa ukuba ulwazi olunika lona luchanekile. Emva koko, uyaqhubeka nokufaka onke amaxwebhu afunekayo nefom yesicelo.
Yenza intlawulo: Inkqubo yokugqibela yenkqubo yesicelo se-visa ihlawula umrhumo wevisa. Sebenzisa ikhadi lakho letyala okanye ledebhithi ukuhlawula imali. Emva kokuba iphepha kunye nefom yesicelo ziqhubekeke ngempumelelo, i-eVisa yakho iya kuthunyelwa ngeposi.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo se-eVisa eMalawi
I-visa yincwadi ekufuneka ubenayo wonke umhambi ohambela eMalawi. Nangona kunjalo kukho ukungafani kwamanye amazwe kunye nemimandla. Abemi abavela kumazwe alandelayo abayidingi i-visa yokundwendwela iMalawi- Antigua neBarbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Dominica, Fiji, Gambia, Grenada, Hong Kong, China, Israel, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malaysia, EMauritius, eMozambiki, eNamibia, eNauru, eMantla eIreland, eSamoa (eNtshona), eSeychelles, eMzantsi Afrika, eSt. Kitts Nevis, eSt. Lucia, eSt. naseZimbabwe.
Yintoni iVisa abakhenkethi baseMalawi?
Urhulumente waseMalawi wazisa ngenkqubo ye-elektroniki apho iindwendwe ezinokuthi ngoku zifumane ii-visa zazo kwi-Intanethi. Le mvume yokuhamba ivumela abatyeleli ukuba bangene kumhlaba wesizwe waseMalawi.
Yintoni esebenzayo ye-eVisa yaseMalawi?
Nje ukuba imvume ivunyelwe, iyasebenza kangangeentsuku ezingama-90.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo ukufaka isicelo se-eVisa yaseMalawi?
Uya kucelwa ukuba ungenise iskena sephepha leenkcukacha zakho kwipasi lokundwendwela, isithombe kunye nobungqina bendawo ohlala kuyo. Ukuba uhamba nomntwana (oneminyaka engama-21 ubudala nangaphantsi) kuya kufuneka unike isiqinisekiso sokuzalwa somntwana kunye neleta yemvume yokugada okanye abazali.
Ngaba kufuneka ndiveze naluphi na uxwebhu xa ndifika eMalawi?
Ewe, ekufikeni kwabo eMalawi, iindwendwe kufuneka zingenise la maxwebhu alandelayo uxwebhu lwe-eVisa oluvunyiweyo kunye nohambo.
Ukubonelela ngobungqina bendawo yokuhlala, abenzi-sicelo banokunikezela ngeenkcukacha zokubhukisha zehotele, indlu yeendwendwe okanye indlu abakhethe kuyo ukuba bakhethe ukuhlala kuyo.
Leliphi inani lamangenelo elivunyelwe yenye ye-Malawi eVisa?
Indawo esebenzayo yaseMalawi ivumela ukungena kube kanye. Oku kuthetha ukuba umntu ofaka isicelo unokundwendwela eMalawi kube kanye, kunye ne-visa yabo.
Yeyiphi imihlali ipaspoti yam ekufuneka ihlangane nayo ukuze ufake isicelo se-eVisa yokuya eMalawi?
Phambi kokuba ufake isicelo se-eVisa yokuya eMalawi, qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela esemthethweni iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokuhlawula umrhumo we-eVisa waseMalawi?
Unokukhetha nayiphi na indlela yokuhlawula kwi-Intanethi ukuhlawula umrhumo we-visa. Unokwenza intlawulo usebenzisa ikhadi letyala elifanelekileyo okanye ikhadi lebhanki.
Emva kokuba isicelo sigqityiwe, abafaki-zicelo baya kwaziswa ukuba isicelo sabo se-visa samkelwe okanye saliwe, kwi-Id yabo ye-imeyile.
Ndingayifumana phi visa yam?
Uyakufumana i-visa yakho kwi-ID yesazisi osichazayo ngelixa usenza isicelo se-Visa. Ungayikhuphela kwaye ufumane ukushicilelwa.